Arsenal iyo Man United Oo Isku Haysta Cavani, 12 Ciyaartoy Oo Ka Tegaya Emirates, Umtiti Oo Ka socda Barcelona, Allegri Oo Old Trafford Kusoo Aaddan Iyo Wararka ugu waaweyn Suuqa Saaka Oo Khamiis Ah - Gool24.Net
Arsenal iyo Man United Oo Isku Haysta Cavani, 12 Ciyaartoy Oo Ka Tegaya Emirates, Umtiti Oo Ka socda Barcelona, Allegri Oo Old Trafford Kusoo Aaddan Iyo Wararka ugu waaweyn Suuqa Saaka Oo Khamiis Ah
January 9, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Waxa toddobaadkii labaad galay suuqa kala iibsiga ciyaaryahannada ee waqtiga jiilaalka oo furnaanaya bishan January, waxaana jira hadal-hayn badan oo ku saabsan laacibiinta ay kooxuhu la kala wareegi doonaan.
Inkasta oo aan la filaynin in ay saxeexyo waaweyn dhacaan bishan, haddana waxa uu isbeddel ku dhici doonaa kooxo badan oo ugu yaraan min hal ciyaartoy isku xoojin doona.
Wargeysyada caalamka ee ciyaaraha oo si maalin leh ah usoo tabinaya xamxamta suuqa iyo dhaqdhaqaaqyadii suuqa ee ugu dambeeyey, ayaa waxa aanu saaka halkan idiinku soo koobaynaa qaar ka mid ah cinwaannadii ugu waaweynaa ee kusoo baxay bogagga hore ee jaraa’idka kasoo baxa Yurub.
Arsenal iyo Manchester United ayaa dalabyo u gudbiyey kooxda PSG oo ay ka doonayaan weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani oo 32 jir ah. (El Chiringuito)
Chelsea ayaa bartilmaameedka aasaasiga ah ka dhigatay difaaca reer France ee West Ham Issa Diop oo 22 jir ah, waxaanay ku doonaysaa £40 milyan. (Express)
Sidoo kale, Chelsea waxay £40 milyan kusoo ceshan kartaa difaaca Bournemouth ee Nathan Ake oo 24 jir ah, laakiin waxa ka horeysa in 23 jirka reer Denmark ee Andreas Christensen ay iska dirayso. (Sun)
Tottenham, Arsenal iyo Manchester United ayaa isku dayaya inay lasoo saxeexdaan daafaca dhexe ee Samuel Umtiti oo 26 jir ah, kaas oo kooxda Barcelona ay doonayso inay iska iibiso. (El Desmarque)
Tababarihii hore ee Juventus Massimiliano Allegri ayaa dib u dhigaya inuu kusoo laabto tababarenimada, waxaanu rajaynayaa inuu Manchester United ka beddelo Ole Gunnar Solskjaer. (Mail)
Ajax waxay isku dayaysaa inay dib usoo ceshato difaaca Matthijs de Ligt oo ay amaah kaga soo qaadato Juventus oo xagaagii ka iibsatay. (A Bola)
Manchester City waxay qorshaynayaa inay samayso afar illaa lix saxeex sannadkan, difaac dhexe iyo baasha bidix ayaa ah meelaha uu Pep Guardiola muhiimadda siinayo. (Telegraph)
Khadka dhexe ee reer Brazil ee Fernandinho oo 34 jir ah, ayaa u dhow inuu heshiis muddo kordhin ah u sameeyo Manchester City oo uu xagaaga dhamaanayo qandaraaskiisii hore. (ESPN Brazil)
Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele oo 23 jir ah, waxa daawaday shaqaale ka socda Chelsea iyo Manchester United kulankii uu goolasha dhaliyey 3-1 ay kooxdiisu kaga adkaatay Stade Bres Arbacadii. (Mail)
Chelsea ayaa la filayaa inay iska deyso inay u dhaqaaqdo laacibka Crystal Palace iyo xulka Ivory Coast ee Wilfried Zaha sababtoo ah, Frank Lampard ayaa u arka 27 jirkan in aanu ku habboonayn kooxdiisa. (90min)
Crystal Palace ayaa iska diidday dalab uga yimid horyaalka Germany ee Bayern Munich oo doonaysay inay la saxeexato Zaha. (Guardian)
Tottenham waxay ku biirtay tartanka loogu jiro weeraryahanka AC Mialn iyo Poland ee Crzysztof Piatek oo 24 jir ah oo lagu heli karayo £30 milyan. (Guardian)
Spurs qorshaha uguma jirto inay si degdeg ah ula soo saxeexato ciyaartoy beddela khadka dhexe ee Moussa Sissoko oo 30 jir ah oo dhaawac ku maqnaanaya illaa bisha April. Kaliya waxay kooxdu lasoo saxeexan doonaan ciyaartoy khadka dhexe ah haddii ay iibiyaan 28 jirka reer Kenya ee Victor Wanyama iyo laacibka caalamiga ah ee reer Denmark ee Christian Eriksen oo 27 jir ah. (Everning Standard)
Weeraryahanka Napoli iyo xulka qaranka Poland ee Arkadiusz Milik oo 24 jir ah ayaa kusoo baxay bartilmaameedka Manchester United. (Sun)
Manchester United waxa kale oo la fahamsan yahay inay xiisaynayso in ay heshiis la gasho difaaca Hellas Verona iyo xulka Albania ee Marash Kumbulla oo 19 jir ah. (Star)
Khadka dhexe ee Arsenal, Emile Smith-Rowe oo 19 jir ah ayaa amaah ku baxaya bishan, iyadoo Gunners ka shaqaynaysa in 12 ciyaartoy ay iska dirto suuqa bishan January. (The Athletic).